Ra’iisal Wasaare Kheyre oo la filaayo maanta inuu safar ku tago Magaalada Baydhabo – STAR FM SOMALIA
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya Xasan Cali Kheyre, ayaa lagu wadaa maanta oo tallaado ah inuu tago Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay, sida ay xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Somaliya.
Safarka Ra’iisal Wasaaraha Somaliya uu ku tagaayo Magaalada Baydhabo, ayaa la xiriira qiimeynta xadiga ay la eeg tahay abaarta ka taagan Gobolada Baay iyo Bakool, maadaama abaarta marka la eego Gobolada dalka dhinaca Koonfur Galbeed ay ku xoogan tahay.
Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Somaliya waxa ay sheegeen Ra’iisal Wasaaraha inuu Magaalada Baydhabo kula soo kulmi doono madaxda Maamulka Koonfur Galbeed.
Dhanka Magaalada Baydhabo waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka Magaaladaasi, ciidamada Nabad Suggida iyo Booliska ayaa lagu arkayaa gudaha Magaalada.
Waxaa la hakiyay isu socodkii dadka iyo gaadiidka Magaalada Baydhabo, iyadoo wadooyinka ciidamada la soo dhigay.
Suxufiyiinta ku sugan Magaalada Baydhabo waxa ay soo sheegayaan in looga yeeray Madaxtooyada Magaaladaasi, si ay uga qayb qaataan soo dhaweynta Wafdiga Ra’iisal Wasaaraha uu ku tagaayo Magaalada Baydhabo.
Waa safarkii ugu horeeyay uu Ra’iisal Wasaare Kheyre uu ku tagaayo Magaalada Baydhabo tan iyo markii loo magacaabay xilkaan.